DEVice KIngdoms - World Technology Technology
Teknolojia ho an'ny olona manerantany
MIARITRA ATAON'NY PHILIPPINES (4K UHD) horonan-tsary 4K
Izao tontolo izao sy ny olona, toetra, bird's-maso, Lahatsoratra. Miscellaneous., -bolana malalaka, -bolana malalaka
Palawan dia sombin-paradisa, sombin-nosy feno zava-miaina hafakely, tanàna fanjonoana fahita ary UNESCO World Heritage Site. Mikaroha biby tandindomin-doza ao amin'ny Kalawit Wildlife Sanctuary na mizaha sambo sambo japoney ao amin'ny Nosy Coron, noheverina ho iray amin'ireo toerana fialofana tsara indrindra.
FLOWTS Over THE MALDIVES (4K UHD) (4K Video Ultra HD)
Izao tontolo izao sy ny olona, toetra, bird's-maso, -bolana malalaka
Maldives, ny Repoblikan'i Maldives ofisialy, dia firenena kely iray atsy Azia atsimo izay miorina amin'ny Ranomasimbe Indianina. Any atsimo andrefan'ny Sri Lanka sy India no misy azy, 700 kilometatra eo ho eo miala amin'ny tanibe Azia. Misy rojo atoll 430 avy eo amin'ny atin'ny Ihavandhippolhu any avaratra ka hatrany amin'ny Addol atoll atsimo (manerana ny ekoatera). Maldives, mibodo ny faritany ...
FLIGHT OVER SCOTLAND (4K UHD) - mozika miala sasatra amin'ny hatsarana voajanahary mahavariana (horonantsary 4K Ultra HD)
Izao tontolo izao sy ny olona, bird's-maso, -bolana malalaka, -bolana malalaka
Scotland, firenena iray izay ampahany ara-pitantanana sy ara-politika mahaleo tena ao amin'ny Fanjakana Mitambatra anglisy sy Irlandy Avaratra, dia faritany iray misy fetra ara-politika, ara-batana sy ara-jeografika, ara-kolontsaina na ara-tantara izay azo faritana mazava sy raikitra, na manjavozavo. (amin'ity tranga ity, matetika, izay ao amin'ny Fanjakana Mitambatra, endrika governemanta na governemanta izay ny lohan'ny fanjakana no mpanjaka, ...
FLIGHT OVER ICELAND (4K UHD) - mozika miala sasatra amin'ny hatsaran-tarehy voajanahary mahavariana (4K Video Ultra HD)
Izao tontolo izao sy ny olona, toetra, bird's-maso
I Islandy dia firenena nosy avaratra ao amin'ny Oseana Atlantika Avaratra miaraka amin'ny isam-ponina 356 mponina ary ny velarantaniny 991 km103 (000 sq mi), ka mahatonga azy io ho firenena be mponina indrindra any Eropa.
FLIGHT OVER SWEDEN (4K UHD) - mozika miala sasatra amin'ny hatsarana voajanahary mahavariana (horonantsary 4K Ultra HD)
Ny anarana ofisialy Suède dia ny Fanjakan'i Suède (ny Suède dia firenena avaratra any avaratr'i Eropa. Manamorona an'i Norvezy any andrefana sy avaratra izy, ary any atsinanan'i Failandy. Mampitohy an'i Danemarka any amin'ny faritra atsimo andrefana izany amin'ny alàlan'ny tetezana iray manerana ny Selat Øresund .
Mexico 4K - mozika mampihetsi-po sy horonan-tsary momba ny natiora mahafinaritra
Malaza noho ny morontsiraka fotsifotsy i Mexico, ny natiora mahatalanjona ary ny tsangambaton'ny maritrano taloha navelan'ny dian-tsoratra. Misy toerana arkeolojika Aztec ao amin'ny tanàna taloha izay eo afovoan'i Mexico City. Ny mpitsidika dia afaka mankafy asa maritrano tsara tarehy marobe toa ny Teatro Palacio de Bellas Artes, ny Tsangambaton'ny Revolisiona, ny Katedraly ao amin'ny fiangonana Metropolitan.
Izao tontolo izao sy ny olona, toetra, -bolana malalaka
Ny Dolomites, fantatra koa amin'ny anarana hoe Dolomites, the Dolomites na Dolomites, dia tandavan-tendrombohitra iray any avaratra atsinanan'i Italia. Izy ireo dia mandrafitra ny faritra atsimon'i Limestone Alpes ary miakatra hatrany amin'ny renirano Adige any andrefana ka hatrany amin'ny Pieve di Cadore Valley atsinanana. Ny sisintany avaratra sy atsimo dia faritan'ny Lohasahan'i Puster sy ny Lohasahan'i Sugana (Italiana: Valsugana). Ny Dolomites dia miorina ao ...
FLIGHT OVER Denmark (4K UHD) - mozika miala sasatra amin'ny hatsarana voajanahary mahavariana (horonantsary 4K Ultra HD)
Danemark, ny Fanjakan'i Danemark amin'ny fomba ofisialy, dia firenena avaratra any avaratr'i Eropa. Danemarka tenany, izay atsimo atsimo amin'ireo firenena Skandinavianina, dia ahitana ny saikinosy Jutland ary nosikely misy nosy 443 antsoina hoe nosy, ny lehibe indrindra amin'izany dia i Zeeland, Funen ary ny nosy Jutland Avaratra. Ireo nosy dia miavaka amin'ny tany lemaka sy ny morontsiraka feno fasika, ny haavon'ny toerana ambany ary ny toetrandro antonony. Any Danemark no misy ...
AUSTRIA ao amin'ny 8K ULTRA HD - Mandehana amin'ny toerana tsara indrindra any Aostralia miaraka amin'ny mozika fahitalavitra 8K miala sasatra
Firenena kely i Aotrisy. Na dia tsy manana mahaliana isan-karazany sy isan-karazany aza izy, ohatra, any Italia na any Gresy, dia manana ny hatsarany manokana i Austria. Saingy azonao atao foana ny manao lisitr'ireo manintona 10 tsara indrindra any Austrian izay tsy tokony hodian-tsy hita rehefa mandeha any Aotrisy. Andao hojerentsika hoe inona izy ireo amin'ny resaka isan'ireo mpitsidika: Lapan'i Schönbrunn: eo an-dohan'ny mpizahatany ...
TONTOLO ANIMALALANA ao amin'ny 8K ULTRA HD • Ny fahitana bibidia sy ny natiora dia fahitalavitra 8K
Izao tontolo izao sy ny olona, toetra
Amin'ity horonantsary 8K Ultra HD ity dia asehontsika ny tontolo iainantsika, izay fonenan'ny karazan-javamananaina sy biby tsy mampino, ary io biodiversité io no mandray anjara mivantana amin'ny fitohizan'ny fiainana eto ambonin'ny planeta. Ny zavamiaina tsirairay dia mitana andraikitra miavaka amin'ny planetantsika. Ny fanjavonana tsikelikely ny zava-boary sy ny biby dia zava-dehibe kokoa noho izay eritreretintsika satria hitarika amin'ny farany ...
Ocean Colours 8K ULTRA HD - Biby an-dranomasina 8K tsara indrindra ho an'ny mozika fitsaharana sy fampitoniana
OCEAN COLORS dia sarimihetsika 8K mahafinaritra sy mampiadana momba ny fiainana an-dranomasina sy ny biby an-dranomasina. Amin'ity horonantsary ity dia afaka mandinika ireo biby an-dranomasina manerana an'izao tontolo izao isika, miaraka amin'ny loko sy endrika mahafinaritra ho an'ny torimaso sy fotoana fialan-tsasatra mampiadana. Tombanana ho 70 sy 80 isan-jaton'ny zavamananaina rehetra eto an-tany dia eo ambanin'ny ranomasina, ary ny ranomasina dia misy 99 ...
Tsara ny fitsaharana. Ary ny fialan-tsasatra tafahoatra dia tsara kokoa ... ary mahafinaritra kokoa 😎
Toerana mahafinaritra eto amin'ny planeta raha ny fijerin'ny vorona 🚁📷 16
Vorona hafakely 🌴🦜
Però 8K HDR 60fps (FUHD)
Tianay ny mizara amin'ny rehetra ny fahitanay izao tontolo izao amin'ny 8K. Peru 8K HDR dia mizaha ny olona sy ny tontolon'ny peroa. Ity firaketana ity dia natao tamin'ny endrika niandohany.
Ny vorona mahatalanjona indrindra eto an-tany 8K ULTRA HD - Relaxing Music & Nature Sounds 8K TV
Ny vorona dia an'ny vondrona vertebrata ary karazana manana elatra mamela azy hanidina indrindra, na dia misy vorona tsy manidina ihany koa. Amin'ny ankapobeny, vorona manidina, mitsambikina, mandeha na milomano amin'ny hafainganam-pandeha tsy mampino….
FLIGHT OVER FRANCE (4K UHD) - mozika miala sasatra sy natiora mahafinaritra - horonantsary 4K UltraHD
Any Eropa Andrefana no misy an'i Frantsa, malaza any Frantsa renivohitra malaza indrindra i Paris, manerantany be fitiavana indrindra eto an-tany, ary koa rafitry ny aritrano malaza sy toerana fizahan-tany manerana ny firenena. Mankanesa any Frantsa amin'ny fitsidihana frantsay hitsidika ny tanànan'ny Roma mahafinaritra be dia be, mankafy ny lohasaha tsara tarehy tsy manan-tsiny ao Morienne, ... Ny fitsangatsanganana frantsay dia safidy tsara foana ho an'ireo mpandeha izay tia ...
Oman mahatalanjona ao amin'ny 4K UHD - Ireo tranonkala voajanahary tsara tarehy indrindra amin'ny firenena Arabo exotic
Ankafizo ny fomba fijery mahavariana momba ireo zava-manintona voajanahary tsara indrindra any Oman! Ny mozika mampitony sy miafina izay miaraka amin'ny fitsangatsanganana dia tsara ho an'ny fialan-tsasatra, fisaintsainana ary fanamaivanana. Manantena izahay fa hampiaiky volana anao ny zava-mahaliana toa an'i: The Magnificent Wadi Ghul (03:10), (44:20) The Incredible Wadi Shab and Al Fanal Village (08:31) Ilay rano maitso manga manintona tao an-tanàna fahizay Qalhat (06:22), (01:46:20) Fahagagana voajanahary - fantsakana karst ...
Costa Rica 4K - mozika miala sasatra sy horonantsary mahafinaritra momba ny natiora
toetra, -bolana malalaka
Costa Rica dia firenena kely any Amerika Afovoany, ary ny renivohiny dia San Jose. Na eo aza ny halehibeny, Costa Rica Costa Rica (Espaniola Costa Rica (Espaniola dia mbola iray amin'ireo firenena dia faritany manana fetra politika, ara-nofo, ara-kolotsaina, ara-kolontsaina na ara-tantara, izay azo faritana mazava tsara sy raikitra ary manjavozavo (in ity tranga ity, matetika dia faritany manana politika, ara-batana-jeografika, kolontsaina na ...
FLIGHT OVER DUBAI (4K UHD) - mozika miala sasatra sy horonan-tsary natiora mahafinaritra - horonantsary 4K Ultra
Izao tontolo izao sy ny olona
Amin'ny maha-iray amin'ireo emirata fito, fanjakana Islamika fehezin'ny Emiran'ny Emira Arabo Mitambatra (Emirà Arabo Mitambatra) fohy, Dubai dia fantatra eran'izao tontolo izao mihoatra ny maritrano maro, tranobe mpamaky trano ary trano foibe ara-barotra. , ny famirapiratan'ny trano fandraisam-bahiny misy kintana 7 ... fa koa ny fampiakarana ny tsena volamena, ny tanàna taloha dia tanàna lehibe iray izay mazoto ny mponina ao ...
Izao tontolo izao sy ny olona, Lahatsoratra. Miscellaneous.
Без рубрики, Izao tontolo izao sy ny olona, Lahatsoratra. Miscellaneous., -bolana malalaka
Izao tontolo izao sy ny olona, Lahatsoratra. Miscellaneous., -bolana malalaka
Iza ireo tanky septic ireo ary inona izany
Raha toa ianao ka nirotsaka tamin'ny fanamboarana ny tranonao manokana, dia na izany na tsy izany dia nieritreritra momba ny fampiharana ny rafitra ara-teknika fanariana fantsom-pivoarana ianao, ny rafitra fananganana volumetrika, planar na tsipika misy tany, any ambony ary (na) faritra ambanin'ny tany, misy beban- mitondra, ary amin'ny tranga sasany, manidy ny rafitra fananganana sy tambajotra fantsom-panafody hanafoanana ny rano maloto ao an-tokontany Rano amoron'ny renirano - mihetsika ...
Sakafo italianina: fomban-drazana, lovia malaza izay tsy maintsy andramanao
Na dia ny anarana ofisialin'i Italia dia ny Repoblika Italiana (Italiana dia nanangana ny tenany ho fanjakana tokana tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ny nahandro Italiana dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX talohan'i JK. Ary ity, hitanao, dia toa mahavariana. Nahandro italiana. Malaza ny mampiavaka ny italianina noho ny fahaizan'izy ireo amin'ny fahandroan-tsakafo, izay tsy misy afa-tsy ny akora ilaina avo lenta, vaovao, azo alaina akaiky indrindra, ...
Tranon-serivisy: fisamborana mpanjifa voalohany-mikasika
Без рубрики, Manampy ny webmaster, Izao tontolo izao sy ny olona, Ny fangatahana Yandex sy Google malaza, Lahatsoratra. Miscellaneous.
Orinasa izay tsy mivarotra entana, fa manome serivisy ho an'ny olom-pirenena sy fikambanana vondron'olona izay fanahy iniana mandrindra mba hahatratrarana tanjona iraisana. Io teny io dia ampiasaina indrindra hilazana vondrona ara-tsosialy mizara fahombiazana, mampiasa Internet ihany koa hitadiavana mpanjifa, fa ny fivarotana an-tserasera dia tsy mety amin'izy ireo - tsy mifanakalo. Indraindray ianao tsy mila pejy maro akory. Ny tena zava-dehibe dia ny mazava ...
Klops: Koenigsberg, tongolo, snellklops
Izao tontolo izao sy ny olona, Lahatsoratra. Miscellaneous., -bolana malalaka, -bolana malalaka
Kaliningrad dia tanàna mahafinaritra, fonenana lehibe, teny ampiasaina amin'ny fehezan-teny amin'ny sehatra samihafa amin'ny asan'ny olombelona, ​​izany hoe, ny mponina ao aminy, amin'ny fitsipika iray, dia tsy mirotsaka amin'ny fambolena, izay hatramin'ny 1946 dia fotoana tsy rafitra. Ny fandrefesana, izay ara-tantara amin'ny ankamaroan'ny kolotsaina dia midika ho tsingerina iray amin'ny vanim-potoana fanovana (lohataona, fahavaratra, fararano, ririnina) dia Königsberg Prussian ary anisan'ny ...
Saosisy. Rosiana sy Alemanina: iza no mandresy?
Avy taiza no niavian'ny faritra ara-pirazanana lehibe any Eoropa Atsinanana, ny anarana ara-tantara an'ny tany Slavy Atsinanana, tany Russia? Ahoana no niarahan'ny saosisy Alemanina sy Rosiana tany Russia na Federasiona Rosiana (RF), fanjakana any Eropa Atsinanana sy Azia Avaratra? Saosisy inona no nohanin'ny razambentsika ary ohatrinona ny vidin'ilay saosisy? Manasa anao izahay hiresaka ... Ny saosisy dia ampahany tsy tapaka amin'ny sakafo haninay. Misy…
Tantra Yoga: Ny hery masina dimy an'i Shakti
Ny yoga dia fotokevitra amin'ny kolotsaina indiana, amin'ny heviny malalaka, midika hoe fomba fanao ara-panahy, ara-tsaina ary ara-batana maro samihafa novolavolaina tamin'ny lalana samy hafa amin'ny hindoisma sy bodisma ary mikendry ny hikoriana - ny yoga amin'ny kolotsaina indiana, amin'ny lafiny lehibe, dia midika hoe karazana fanao ara-panahy, ara-tsaina ary ara-batana isan-karazany novolavolaina tamin'ny lalana samihafa, teny tsy mazava izay mety hidika hoe: Ny làlan'ny vector - ...
1 2 3 ... 5 Mandrosoa "
Manampia lahatsoratra tsy misy fisoratana anarana
Eto amin'ny instagram izahay
Hijery amin'ny Instagram
Sokajy Misafidiana lohateny Без рубрики Manampy ny webmaster Izao tontolo izao sy ny olona Ny fangatahana Yandex sy Google malaza toetra Zavamaniry nofaritana voalohany tao amin'ny boky Species Plantarum bird's-maso namboarina Lahatsoratra. Miscellaneous. Pejy misy lanjan'ny abidia Taxi-biby antsoina hoe araka ny olombelona Taxi-bibikely antsoina hoe araka ny olombelona Taxi-javamaniry apetraka amin'ny anaran'ny olombelona Flora any asia Flora avy any Amerika Avaratra Endemics any Aostralia Endemika any Sina Endemics an'i Amerika Avaratra Endemika any Amerika atsimo Endemics an'i Japon -bolana malalaka -bolana malalaka
Manampia paositra miaraka amin'ny fisoratana anarana:
Tsiambaratelo sy politika momba ny cookie: Mampiasa cookies ity tranonkala ity. Rehefa manohy mampiasa an'ity tranonkala ity ianao dia manaiky ny hampiasan'izy ireo.
Afaka mahita fampahalalana bebe kokoa ianao, ao anatin'izany ny fitantanana cookies, eto: Politikan'ny cookie
Lohahevitra avy amin'ny	WP Puzzle
Mametraha hevitra ...